Obi ụtọ na-na-anabata gaa China Red Flag Textile
site ha na 18-05-07
Kwa izu, ndị ahịa si n'ụwa nile na-abịa ileta China Red Flag Textile, Ukraine, Turkey, Russia, Moldova, Romania, Egypt, India, Indonesia, Vietnam, Brazil, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Venezuela, Mauritius wdg Site ubi gaa China Red FL ...
Ịga nke Ọma Textile International ngosi ngosi
Nso nso ọkara afọ, China Qingdao Tianyi Group Red Flag akwa ígwè ama ekere Turkey Istanbul, Indonesia Djakarta, Pakistan Karachi, Egypt Cairo, Bangladesh Dacca, India Ahmedabad na Surat International Textile ngosi. Izute ọtụtụ ndị enyi na ọtụtụ ndị ọhụrụ ahịa. Na-esi na k ...
Great! 3 ụbọchị kwajuru 24 40-ụkwụ Containers
Egypt nnukwu ahịa, na-ama ịzụta ihe karịrị otu narị ikuku ugboelu looms. Daalụ maka ya kwere na nkwado. Nke a oge, 24 40-ụkwụ containers kwajuru ọzọ. All looms na-omenala mere igwe, ikuku Tuck-na usoro: Operation na mmezi mfe, elu oru oma na ichekwa ike. Best uru bụ nke ...
2018 Professional ọzụzụ
Mgbe China New Year ememme, mbụ ọkachamara ọzụzụ. All ọrụ ga-azụ na na-anwale ọkọlọtọ larịị nwere ike nweta n'ime nkịtị na-arụ ọrụ. Site n'ihu-akara nzukọ ndị ọrụ mgbe-ọrụ ọkachamara mkpara, gụnyere ahịa ahịa, ego ọrụ, àgwà ego ndị ikom na ndị na na. W ...
Shanghai ITMA Asia + CITME 2016 Trade ngosi
The ITMA Asia + CITME 2016 e ẹkenịmde na Shanghai, China si 21 na 25 October na National ngosi na Convention Center. Qingdao Tianyi Group Red Flag Textile Machinery CO., LTD ẹkenịmde technical mkparịta ụka ihe karịrị 1,000 ọbịa n'oge ụbọchị ise nke Shanghai ngosi. Ọtụtụ n'ime nke ...